स्टीव Buscemi - एक लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेता, सय एक भन्दा बढी फिल्म भूमिकाको लागि खाता जो। तिनीहरूमध्ये एक मानिस admirably आफ्नो प्रतिभा को बहुमुखी प्रदर्शन जसमा समर्थन भूमिकाको, साना र प्रमुख छन्। Buscemi मात्र होइन निर्देशक काम अभिनय, तर द्वारा सबैलाई अचम्ममा। म हाल सम्म यो ठूलो अभिनेता doubted कि आफ्नो युवावस्थामा चुनिएको मार्ग को विशुद्धता एक साधारण फायरमैन रूपमा काम विश्वास गर्न सक्दैन।
स्टीव Buscemi डिसेम्बर 13, 1957 मा न्यूयोर्क मा जन्म भएको थियो। Dzhon Bushemi, अभिनेता पिता, इटालियन मूलका थियो भाग लिए कोरियाई युद्ध, र संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक सरल मेहतर काम गरे। Dorothy Buscemi, स्टीव आमा त्यो राष्ट्रियता द्वारा एक महिला बेरा रूपमा काम गरे, आइरिस थियो। परिवार आमाबाबुले कठिन समय थियो, चार छोराहरू थिए, तर गरिबी र काम आमा र बाबु को प्रतिष्ठा को बाबजुद, बालबच्चा यो लज्जित छन्।
अझै पनि विद्यालय Buscemi एक अभिनय क्यारियर को सपना देख्यो मा, उहाँले सक्रियतासाथ थिएटर रुचि थियो। उच्च स्कूल पछि, मान्छे एक semester लागि अध्ययन भएको उदारवादी कला को कलेज गए, तर, त्यो आमाबाबुले प्रशिक्षण लागि पैसा थिएनन् किनभने, बाहिर घट्यो। उनको पिता देखि दबाब, स्टीव आगो गर्न भन्दा कागजात र आवश्यक परीक्षा हस्तान्तरण, जवाफ तीन वर्षसम्म प्रतीक्षा थियो।
एक firefighter बन्नुअघि स्टीव Buscemi एक वेटर, newspaperman, एक लोडर, बरफ-क्रीम रूपमा काम गरे। यसलाई आफ्नो जीवनमा धेरै कठिन समय थियो, तर जवान एक अभिनेता बन्ने आशा छोड्न भएन। Buscemi भटक तीन वर्ष आगो सुरक्षा को सेवा गर्न लिए पछि, यो मामला उहाँले आफ्नो जीवनको चार वर्ष समर्पित छ। सबै गर्दा, मान्छे सुरक्षित र पैसा बचत प्रशिक्षण लागि भेला गर्न। बित्तिकै उहाँले तुरुन्तै उहाँले resigned आवश्यक रकम संकलन गरेको थियो रूपमा, मैनहट्टन सारियो र थिएटर संस्थान प्रविष्ट गर्नुभयो।
पनि एक विद्यार्थी रूपमा, स्टीव, शहर मा सानो थिएटर मा नाटकहरु उत्पादन लिपि लेखे। 1985 मा उहाँले पहिलो फिल्म Stiv Bushemi मा तारा अङ्कित। Filmography फिलिमहरु replenished "टमी।" त्यसपछि, जवान अभिनेता धेरै फिलिम काम गर्न आमन्त्रित गरिएको छ, तर तिनीहरूले साना, inconspicuous भूमिका थियो। पहिलो पटक सार्वजनिक फिल्म बिल शेरवुड गरेको पछि Buscemi कुरा सुरु "जानेबेलामा हालन।" स्टीव एड्स को मरिरहेका एक संगीतकार प्ले। उहाँले केही मिनेट लागि स्क्रिनमा देखा, तर धेरै सम्झना। Buscemi बारेमा उहाँले आफ्नो कलात्मक क्यारियर सुरु देखि, एक जवान र धेरै होनहार अभिनेता रूपमा बारेमा कुरा।
1990 मा, स्टीव Buscemi थाह भयो को Coen दाजुभाइ, "मिलर गरेको पार" र: उहाँले दुई चलचित्रमा तिनीहरूलाई तारा अङ्कित "बार्टोन Fink।" 1991 मा, अभिनेता आफ्नो चलचित्रमा श्री गुलाबी को भूमिका खेल्दै, Quentin Tarantino संग काम छ "Reservoir कुकुर।" दर्शकहरूले "फारगो," "गरदै एयर," यस्ता चलचित्रहरू को Buscemi नायक मनपराएका "बिग Lebowski।" फिल्म स्टीव एक ठूलो भूमिका रोड्रिग्वेज 'Desperado' गए। आफ्नो नायक जो गितार भण्डारण गरिएको छैन एक मामला, र हतियार संग bartender मेक्सिकन डरा।
सिनेमा स्टीव Buscemi सधैं अचम्मको चमक र तस्बिरहरू को बहुमुखी छ। ठूलो जिम्मेवारी अभिनेता यसलाई प्राथमिक वा प्रासंगिक छ कि छैन भनेर बिना प्रत्येक भूमिका गर्न आउँछ। मानिसले आफ्नो वर्ण, व्यवहार, बानी अन्वेषण, आफ्नो चरित्र मा रूपान्तरणहरूलाई। उदाहरणका लागि, स्टीव को morgue एक कर्मचारी को भूमिका दिइएको थियो जब, morgue उहाँले भ्रमण र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी कुरा, र स्क्रिनमा एक विशिष्ट व्यक्ति को छवि गरियो।
लागि मांग र ठूलो प्रतिभा बावजुद, अभिनेता स्टीव Buscemi मुख्य रूप एक सानो भूमिका खेल्छ। अभिनेता कुनै पनि भूमिका सामना गर्नेछ - निर्देशित खुसीसाथ देखि 100% पक्का, उनको उसलाई भनिन्छ। Buscemi फिलिम को धेरै रील मा तारा अङ्कित , Adama Sendlera उहाँले टिभी श्रृंखला को दुई मौसम मा एक प्रमुख भूमिका खेल्ने मौका रूपमा "बोर्डवक साम्राज्य।" यो भूमिका यसको नाटक खोल्न अभिनेता, मदत नायक को वर्ण को जटिलता र अस्पष्टता देखाउँछ।
सफल कामको लागि पनि टिभी श्रृंखला "द Sopranos" रोमाञ्चक "आरमागेडोन", नाटक "ठूलो माछा" र "कफी र चुरोट", 2003 मा खिच्नुभयो समावेश गर्नुपर्छ। कल्पना रोमाञ्चक "द्वीप", एक melodrama "पेरिस, म तपाईंलाई प्रेम," नाटक "द दूत" - अभिनेता लागि सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा सफल फिलिमहरु छ। प्रत्येक फिल्मस्ट्रिप मा स्टीव Buscemi 100% दिन, र यो लागि उहाँले दर्शक जस्तै थियो।
मात्र होइन प्रतिभा अभिनय, तर पनि निर्देशन गतिविधि सार्वजनिक Stiv Bushemi हैरानी। यो असाधारण मानिसको जीवनी धेरै असामान्य छ। उनले मेरो जीवनमा के थियो के गर्छ! तर उहाँले चाहन्थे के पायो। आज Buscemi एक लोकप्रिय र मांग-पछि अमेरिकी अभिनेता, सक्रिय टेलिभिजन शो मा र चलचित्र काम छ। 1996 मा, स्टीव आफ्नो हात एक निर्देशक रूपमा आफ्नो पहिलो काम उहाँले एक प्रमुख भूमिका खेलेका जसमा "पेड, मा छुट्टी" फिल्म थियो खोजे। त्यसपछि कार्य चलचित्र "पशु कारखाना" 2000 मा गोली थियो, 2002 मा - फिल्म "पत्नीले बेसबल", 2005 मा उहाँले 2007 मा नाटक "Lonesome जिम," प्रकाशित - को रोमाञ्चक "साक्षात्कार" स्टीव मुख्य पात्र प्ले जसमा।
व्यक्तिगत जीवन स्टीव Buscemi आफ्नो रचनात्मक क्यारियर रूपमा संतृप्त छ छैन, तर यो सबै भन्दा राम्रो को लागि हो। मानिस एक पन्जा जस्तै महिला परिवर्तन, एक डन जुआन प्रकार छैन। स्टीव उहाँले एक भेटे र मात्र, कि उसलाई धेरै वर्ष को लागि खुसी, भाग्यशाली थियो। Buscemi विवाहित अभिनेत्री र निर्देशक Dzho Anders ज्ञात। 1997 मा, जोडी एक छोरा, Lucian, बारम्बार मेरो आमा र मेरो बुबा जस्तै चलचित्रमा काम केटा थियो। Buscemi एक भाइ माइकल छ, उहाँले पनि प्रसिद्ध अभिनेता भयो, र उहाँले पनि स्टीव सबै परियोजनामा सक्रिय भाग लिन्छ।
को जीवनी देखि रोचक तथ्य
स्टीव सधैं अघि, प्रस्तावित भूमिका स्वीकार गर्न पूर्णतया पत्ता लगाउन आफ्नो चरित्र के हुनेछ लिपि पढ्न र उहाँले फिल्म को अन्त मा जीवित रहनेछ कि।
फिल्म धेरै तरिकामा "पछिल्लो नजर" शूटिंग जीवन Buscemi, सामान्य आफ्नो दृष्टिकोण गर्न मनोवृत्ति परिवर्तन भयो। उहाँले आवश्यकता हरेक क्षण कदर र दान जीवनको लागि आभारी हुन भनेर बुझे।
स्टीव Buscemi आँखाहरु भन्दा दर्शकहरु को ध्यान आकर्षित छन्। तिनीहरूले यसलाई स्मरणीय उपस्थिति बनाउन।
1997 मा, ब्रिटिश पत्रिका "साम्राज्य" Buscemi सबै समय को सबै भन्दा राम्रो अभिनेता को एक पहिचान, स्टीव को आदरणीय 52-औं स्थिति मा स्थित छ जो "शीर्ष 100", सूची साथ दिए।
अभिनेता नसाहरु इटालियन र आइरिस रगत बग्छ।
सेप्टेम्बर 11, 2001 न्यूयोर्क व्यापार केन्द्र Buscemi मा शोकमा पछि आफ्ना सबै मामिलामा फेंकता, र उद्धार र खाली blockages लागि स्वयंसेवकहरु मा रेकर्ड गरिएको छ। सँगै उद्धार सेवा र 12 घन्टा को लागि दमकल मानिस देखि आफ्नो पूर्व सहकर्मीसँग लगातार लगे र disassembled शरीर भग्नावशेष। एकै समयमा, स्टीव कुनै पनि अन्तरवार्ता र टिप्पणीहरू दिन इन्कार गरे।
"भूत दुनिया" नाटक मा सेमोर रूपमा आफ्नो भूमिका, 2000 मा जारी लागि, स्टीव Buscemi विभिन्न फिलिम चाडहरूमा र धेरै चापलूसी आलोचकहरु धेरै पुरस्कार जित्यो।
Nikolay Dmitrievich Chindyaykin, अभिनेता: जीवनी, Filmography र रोचक तथ्य
मैडिलीन Dzhabrailov अभिनेत्री: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, चलचित्र को भूमिका
"मृत्यु प्रमाण": अभिनेता, भूमिकाको र फोटो
अभिनेत्री वेरा Kuznetsova: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। शीर्ष तारा भूमिका
Shahmatov Aleksey: तस्बिर, जीवनी र टिभीमा प्रस्तोता को व्यक्तिगत जीवन
रेस्टुरा "मारियो", मास्को: समीक्षा, फोटो, ठेगाना
सम्मान गार्ड - सम्मान सेवा ठाउँ
महिला सामान्य यौनजन्य रोगहरू
गिलास कसरी बनाइएको छ?
मासु को बाहुला मा सुखा। व्यञ्जनहरु
ऋण संग्रहकर्ता को बिक्री। बैंकहरू संग्रहकर्ता द्वारा कानुनी संस्थाहरू र व्यक्तिहरूको ऋण को बिक्री को सम्झौता: नमूना